kaspersky 7.0 — MYSTERY ZILLION
March 2009 edited May 2010 in Sharing
Some one can share to me....
Lastnight My kaspersky7keys are already blacklist.
Pls share to me some of activate key
ဒီဆိုက်မှာသွားကြည့်လိုက်နော် ... www.kavkiskey.com ... Key တွေအများကြီးပဲ။
Black List မဖြစ်အောင် ... StarLay ရဲ့ ဒီ Post ကိုသွားကြည့် .....
:30: Hay, I will mail to you crack program and key.
Good Luck. :67:
:103:Thanks to all brother....
I'll try it.....:)
mail လိပ်စာပြောပါ ပို့ပေးပါမယ် .. နောက်ထပ် (2) နှစ်စာလောက်ကျန်ပါသေးတယ် 2011 April မှ ကုန်မှာပါ .. Version က 7.0.0.125 en ဖြစ်ရပါမယ်..
tell me ur kav version ... if i got ur kav version, i can help you ...
kaspersky 7.0.0.125 en
ကပ်စပါးစကီး ဘလက်လစ်မဖြစ်အောင် ဒီတခုကို သုံးနေကြတာတော့ ကြာပါဘီ။ အချို့ မသိသေးသူများ သုံးကြည့်နိုင်ဖို့ ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
kis7, kav7, kis8, kav8 တို့အတွက်တော့ ကောင်းကောင်း အလုပ်လုပ်ပါတယ်။
အသုံးပြုရမယ့် path file ဒေါင်းဖို့ လင့်လည်း ပါပါတယ်။ အသုံးပြုပုံ အဆင့်လိုက်လည်း ရေးထားပေးပါတယ်။
ဒီစာမျက်နှာမှာ အသေးစိတ် ဖတ်ရှုနိုင်ပါကြောင်း။
အဲဒီ Patch လေးကို StarLay ဆီက ကျနော်ရထားတာကြာပြီ ... Kaspersky7အတွက်ကတော့ သိပ်ကိုကောင်းပါတယ် ....
Kaspersky 2009 မှာ Black List မဖြစ်အောင်လုပ်ပေးနိုင်၊မနိုင်တော့မသိဘူး။
Bro စမ်းကြည့်ဖူးလား ?
Kaspersky 2009 ( Kaspersky 8 ) ကိုပါ Black List မဖြစ်အောင်လုပ်ပေးနိုင်ရင်အဆင်ပြေတာပေါ့။
စမ်းဖူးရင် Result လေးတစ်ချက်ပြောပြပေးပါဦး Bro ....
ဒို့လဲယူမယ် ကက်စပါကြိုက်ပေမယ့် Blacklist ကတော်တော်ဒုက္ခပေးတယ်... မေးလ်ကတော့.... အောက်က signature မှာပေးထားတယ်.. အဲဒီ့ကိုပဲပို့လိုက်နော်...
ကျွန်တော်ဆီကိုလဲ ပို့ ပေးပါ ခင်ဗျာ
တောင်းတဲ့သူတွေရော...မတောင်းဘဲ.. သွားဖြီးပြတဲ့သူတွေကိုရော အားလုံးကိုပို့ပေးထားပြီးပါပြီ .. အဆင်ပြေကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်.. ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း Network တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ အုန်းစားနေ ဆဲမို့ပါ.. အဆင်မပြေခဲ့ရင် PM ပို့လို့ရပါတယ်..
ကိုကို. မမ တို့ရေ.. kav & kis7အတွက် ကတော့ အဲဒီ path file လေး ကိုယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ သာ သုံးလိုက်ပေတော့ဗျာ... ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် အဲဒီကီးတွေ အတွက် အရင်ကဆို တော်တော် ဒုက္ခ ရောက်ခဲ့ တာ ဗျ... အခု အဲဒီ path file လေး နဲ့ သုံး ပြီးတော့ စက် အလုံး ၄၀ ကျော် ကို kav7ကြည့်ပဲ သုံးထားတာ အခု တော်တော် လေး ဒုက္ခအေး သွာတယ် ဗျ...အရင်ကလို ခဏခဏ blacklist ဖြစ်ဖြစ်သွား ကီးအသစ်တွေထပ်ထပ် ရှာ စရာ လဲ မလိုတော့ ဘူး ရက်စွဲ မကုန်သေးတဲ့ blacklist ဖြစ်သွားတဲ့ ကီးတွေတောင် ပြန်သုံးလို့ ရတယ်ဗျ... ကျွန်တော် လည်း MZ က star lay ဆီကနေ ယူထား ပြီးတော့ သုံးထားတာ.. အဲဒီအတွက် လည်း ကျေးဇူး တင်ပါတယ်......... နောက်တစ်ခေါက် ထပ် ပြော လိုက်ပါတယ် ခင်ဗျာ.......:((:((:((:((
အဲ့ဒီ patch file လေးလိုချင်လို့ပါ..
rapidshare လင့်ကနေယူကြည့်ပါတေးတယ်.. ဘယ်လိုမှလုပ်လို့မရဘူးဖြစ်နေလို့..
madiafire & Ko starlay တင်ထားပေးတဲ့ link ကလည်း ဘန်းထားတော့ဖွင့်လို့မရဘူးဖြစ်နေလို့..
ifile.it ကနေပဲဖြစ်ဖြစ်.. ဒါမှမဟုတ်လိပ်မလေးမေးလ်ကို ဖြစ်ဖြစ် ပို့ပေးစေလိုပါတယ်..
လိပ်မလေးမေးလ်က [email protected] ပါ.
key တွေကတော့အများကြီးပါ..ဒါပေမယ့်black list ဖြစ်ဖြစ်သွားလို့ကူညီပါဦး...
အပေါ်ကလင့်မှာ patch ရှိတယ် သုံးကြည့်ပါလား။ ဘက်လက်လစ်မဖြစ်တော့ဘူး။:D
လိပ်မလေးက အခုမှ စပြီး စမ်းသုံးကြည့်တာ
ကူူညီပါ အကို အခု kaspersky7 update လုပ်တာ မရ ဘူူး blacklist ဖြစ်နေလို့ပါ email [email protected] ပါ ကျေးဇူးမမေ့ပါဘူး virus တွေများလို့ အိမ်ကဆူနေ တာ update ၀ယ်ပြီး update လုပ်ကာမှ blacklist နဲ့ ညားသွားလို့ ငို ရမလားတောင် မသိတော့ဘူး အ ကို ရ ... money ကုန်သွားပြီ update လည်း ရက်လွန်သွားပြီ ...း(
ကျွန်တော်လည်း kav7သုံးနေတာေ တာ်တော်အဆင်ပြေပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ရှိတဲ့ကီးက 2010 မေလကုန်မှာမို့ အစ်ကို့မှာ
2011 ထိရှိတယ်ဆိုရင် ပို့ပေးပါချင်ဗျာ။
ကျေးဇူးပါ။ myatminchitအတ်ဂျီမေးဒေါ့ကွန်း ဖြစ်ပါတယ်။
Originally Posted by Moe Zatt Ko
အကို [email protected] ပါ kaspersky7blacklist ဖြစ်နေ လို့ပါ key လိုချင်ပါတယ် ကျေဇူးတင်ပါတယ် အကို
ကျနော်ကိုလည်း ပို့ပေးစေချင်ပါတယ် ...
I want to use Kasper 7.Please send me keys.<br>Myemail is [email protected]<br>Thank.<br>